I-villa enhle yokulala engu-6 ene-pool - I-Airbnb
I-villa enhle yokulala engu-6 ene-pool
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Eph 27.
Konke kumayelana nendawo emangalisayo nomuzwa wokuthula. Ukuthi ugqolozele izintaba, amagquma nemizana ebukekayo yonke indlela eya olwandle, intanta echibini elingapheli ubheke ngaphesheya uye emibukweni ekude noma uhlezi kuvulandi ngesiphuzo ubukele imizana yasendaweni ikhanya njengezibani zezinganekwane njengoba kungena ubumnyama.
Le villa enhle eyakhiwe ngamatshe yaklanywa kucatshangwa ngomndeni wethu omkhulu futhi iyikhaya elibanzi elakhiwe ngaphezu kwezitezi ezi-3 futhi labekwa endaweni yalo evalekile enezithelo neminqumo.
I-Villa Belvedere inikeza indawo ekahle yokuphumuza umoya, ujabulele ukuthula nokuthula futhi nichithe isikhathi esihle ndawonye. Abekho omakhelwane abangakunaki futhi zimbalwa izimoto ezidlulayo. Nokho-ke ayihlukanisiwe ngokuphelele- uma ulungele ukuhamba imizuzu eyi-15 ufika endaweni yokudlela yasendaweni enhle noma isitolo esijwayelekile. Amakamelo angaphakathi anosayizi omuhle futhi kunendawo yokuhlala eningi. Kukhona ovulandi phezu kokubheka amagquma namadolobhana akude, nezindawo ezingaphandle zokudlela. Kunokubukwa okumangazayo okungu-360 degree, okuhle kakhulu okuvela emaphethelweni echibi le-infinity….
ubusuku obungu-7 e- Palombaro
I-Palombaro iyidolobhana elihle eliphakathi nendawo elisezintabeni (alt. 536m) elinabantu abangaba ngu-1100. Inezitolo ezincane ezimbalwa, iposi kanye nebha. Inomuzwa omangalisayo wobuthongo, futhi iyindawo ethandekayo yokuzulazula, ijabulela imigwaqo emincane yomlando kanye nemibono emangalisayo.
Ngitholakala ngezikhathi zokuvuka kumbhalo, ifoni noma i-imeyili futhi ngizozama futhi ngiphendule ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ngenkathi uhlala kule ndawo uzobhekwa uMarta noRafal abatholakala endaweni futhi engizokunikeza imininingwane yabo uma ungena.
Ngenkathi uhlala kule ndawo uzobhekwa uMarta…